Fampielezan-kevitr'i Larval | Reef Resilience
Ny Corals dia mampiasa fomba roa samy hafa fambolena. Fanabeazana ara-pananahana misy gametes coral (izany hoe atody sy tsirinaina) navotsotra na 'nateraka' tao anaty tsanganana rano izay niangona ary namorona zanatany haran-dranomasina tsy manam-paharoa. Asexual reproduction ahitàna ny famoronana zanatany haran-dranomasina izay mitovy endrika (na 'clones'). Mitranga izany na dia mizarazara aza, izay potiky ny zanatany haran-dranomasina ary maniry ho lasa zanatany vaovao, na zana-kazo vaovao, izay anaovan'ny polipara haran-dranomasina ho lasa polyp roa mitovy. Budding no dingana mamela ny zanatany haran-dranomasina hitombo lehibe kokoa. Ny ezaka fampielezana mavitrika dia afaka mampiasa ireo fomba roa ireo, miaraka amin'ny vidiny sy tombontsoa samihafa.
Ny famerenana amin'ny laoniny ny vaovao sy ny fanangonana haran-dranomasina vaovao manana toetra samihafa dia tena ilaina amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny vatohara. Raha ambany ny isan'ny haran-dranomasina, ny fandraisana mpiasa voafetra dia mety hanakana ny fanarenana ny haran-dranomasina na dia eo aza ny hetsika fitantanana hafa. Ity fizarana ity dia mamaritra ny dingana mifandraika amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny vatohara amin'ny alàlan'ny fomba fampielezana ny lozabe amin'ny fampiasana ny fizotran'ny fiterahana.
Ny tombontsoa lehibe indrindra amin'ny fampiasana fananahana ara-nofo ho an'ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina dia ny fahafaha-manatsara ny isan'ny vatohara, miasa miaraka amin'ny karazam-borona sy morphologie maro, ary mampitombo ny fahasamihafana misy eo amin'ny haran-dranomasina amin'ny haran-dranomasina. Na dia in-1-3 monja aza ny fisehoan-javatra fananahana amin'ny haran-dranomasina dia mety manome corals zaza an-tapitrisany maro - ny tsirairay amin'izy ireo dia maneho olona vaovao.
Mazava ho azy fa misy ihany koa ny fanamby amin'ny teknikan'ny fampielezana ny lozabe. Ohatra, ny ankamaroan'ny fisehoan-javatra haran-dranomasina dia mitranga amin'ny alina, ny olitra haran-dranomasina dia bitika bitika ary mora tohina, ary ny olitra dia mitaky fitakiana ekolojika manokana mba hipetrahana sy metamorphosis mahomby. Noho izany dia ilaina ny traikefa sy fanomanana be dia be hiatrehana ireo teknika famerenana amin'ny laoniny ireo ary hampirisihina ny fianarana bebe kokoa amin'ny manam-pahaizana.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoJereo ny horonantsary fanadihadiana farany momba ny teknika fampielezana larvalin'ny SECORE.